Villa Reglowka. Indawo yomlilo, ithala, igadi kunye nomlambo - I-Airbnb
Villa Reglowka. Indawo yomlilo, ithala, igadi kunye nomlambo
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguKateryna
Indlu epheleleyo enomtsalane okhethekileyo efumanekayo kwiqela elinye okanye ukubhukisha usapho kuphela.
I-villa ifumaneka kwi-5 min. kude neNadarzyn, i-15 min. kude neMiedzynarodowe Centrum Ptak Warsaw Expo, imizuzu eyi-10 kude ne-Światowe Centum Słuchu eKajetany, imizuzu emi-5 ukusuka eCentrum Handlowe eWólka Kossowska, imizuzu eyi-25. ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseFryderyk Chopin kunye ne-30 kude neSikhululo sikaloliwe esiphakathi eWarsaw.
IReglówka enesitayile, yomhlalaphantsi ime kwibala leehektare ezi-3, ekhathalelwe kakuhle kwaye ijikelezwe buhlaza kwilali yaseWola Krakowiańska. Ingaphakathi lendlu lihlotshiswe kwaye linikwe izinto ezivela kwingqokelela ye-antique yangasese yomnini wendlu. Uza kufumana apha i-tapestries yaseCaucasian eyenziwe ngesandla kunye neekhaphethi ezivela kuMbindi Mpuma, ifenitshala endala kunye nodaka, i-jacquards yaseFransi kunye namakhethini e-Art Nouveau. Iindwendwe zethu zinokusebenzisa i-Intanethi yasimahla.
Le ndlu ehlotshiswe kwisitayela se-classical inikwe isethi yeTV, i-Wi-Fi kunye ne-terrace enekona yokuzonwabisa ebonelelwe ngendawo yomlilo. Esi sibonelelo sikwanekhitshi eligcwaliswe ngokupheleleyo, ifriji, umenzi wekofu, iketile yombane kunye nesipheki. Ukulahlwa kweendwendwe kwakhona igumbi lokuhlambela elineshawa, izinto zangasese ezilahlwayo, isomisi seenwele kunye nomatshini wokuhlamba.
Onke amagumbi ajonge igadi. Esi sibonelelo sikwabonelelwe ngophahla phezu kwethafa elinekona yebarbecue kunye ne-arbor ejonge ihlathi kunye nedlelo elinefenitshala yegadi, izixhobo zamalahle kunye nebarbecue. Iindwendwe ezinezilwanyana zasekhaya zamkelekile. Indawo yokudlala yabantwana isemva kweyadi ibiyelwe ngokukhuselekileyo. Kwintsimi yeziqhamo, phakathi kwemithi yama-apile neplum, phezu kweendwendwe; sicela ukuba sibambe umcimbi ngomlilo. Kwindawo enye, sinokutshisa ilanga ehlotyeni kwaye sinokupholisa abantwana bethu emanzini ase-Utrata ngexesha lobushushu behlobo.
Bonisa zonke 80 izinto onokuzisebenzisa
I-Villa Reglówka ibekwe ngasemlanjeni we-Utrata, kude kufuphi ne-Młochow Reservation kunye nehlathi eliyinkimbinkimbi, kwindawo ebanzi kunye nenomtsalane. Kuyenzeka ukuba ubukele kwiifestile ze-villa ixhama lifuna ukutya, iintaka zasendle kunye nomvundla.
Kumgama oziikhilomitha ezi-2,5, kukho ibhotwe kunye nepaki yaseMłochow. IPaki ivuselelwe ngokucokisekileyo kwaye ibonelelwe ngeendlela ezijikajikayo phakathi kwemithi emidala emihle, amachibi kunye nemithombo.
Siqinisekisa indawo yokupaka yasimahla nekhuselekileyo.
Ipaki enkulu yamanzi angaphakathi eYurophu "Ipaki yasePoland" yimizuzu engama-20 ukusuka kwi-villa
Umbuki zindwendwe ngu- Kateryna
Iilwimi: English, Polski, Русский, Українська